MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: 2013-06-23
at 6/29/2013 06:27:00 PM No comments:
at 6/28/2013 09:44:00 PM No comments:
at 6/28/2013 06:52:00 PM No comments:
၂၆ ရက်ည ၈ နာရီကျော်ခန့်မှစ၍ သျှမ်းပြည် (မြောက်ပိုင်း) မူစယ်ခရိုင် ကြူကုတ် - ပန်ဆိုင်းမြို့နယ်ခွဲ အတွင်း KIA နှင့် အစိုးရတပ်တို့အကြား နှစ်ဘက်တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ဒေသတွင်းလာသည့် သတင်းများအရ သိရသည် ။
ကြူကုတ် - ပန်ဆိုင်းမြို့နယ် နမ့်ဟူးရွာအနီး ကောင်းဆထေးနေရာတွင် နှစ်ဘက်တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ် ကြောင်း ပန်ဆိုင်း ဒေသခံတစ်ဦးက သျှမ်းသံတော်ဆင့်သို့ ပြောသည် ။
at 6/28/2013 12:01:00 PM No comments:
at 6/28/2013 09:47:00 AM 1 comment:
at 6/28/2013 09:46:00 AM No comments:
at 6/28/2013 08:20:00 AM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်း စစ် ပြသနာကို အပစ်အခတ် ရပ်စဲသည့် နည်းဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ကြောင်း နိုင်ငံရေးတွေ့ ဆုံ ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့်သာ အဖြေရှာ သင့်ကြောင်း ကချင်လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ KIO ဗဟိုကော်မတီဝင် တစ်ဦးက ဆိုပါသည်။
at 6/27/2013 08:44:00 PM No comments:
at 6/27/2013 08:42:00 PM No comments:
at 6/27/2013 04:02:00 PM No comments:
at 6/27/2013 03:54:00 PM No comments:
at 6/27/2013 03:42:00 PM No comments:
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များနှင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရုံနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ရပြီဟု မဆိုနိုင်ဘဲ နိုင်ငံရေးအရ ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် များစွာကျန်ရှိနေသေးဟု သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ဇွန် ၂၅ ရက်က နေပြည်တော်၌ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် စီမံကိန်း ကော်မရှင် အစည်းအဝေးတွင် အစိုးရအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်များအား ပြောကြားသည်။
နှစ်ပေါင်းခြောက်ဆယ်ကျော် ကြာခဲ့သည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများ ချုပ်ငြိမ်းအောင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အားလုံးနီးပါးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီး သဘောတူညီချက်များကို လက်မှတ်ရေးထိုး နိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု အားလုံးနီးပါး ရပ်စဲသွားပြီဖြစ်၍ မကြာမီ ကာလအတွင်း လွှတ်တော်သို့ တင်ပြပြီး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုး နိုင်တော့မည် ဖြစ်သည်ဟု သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ပြောကြားသည်။
at 6/27/2013 09:16:00 AM No comments:
ကချင်ပြည် နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ ထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်သော ရှမ်းပြည်မြောက် ပိုင်း ကေအိုင်အေ တပ်မဟာ (၄) လက်အေက် ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၃၆) ဒေသတွင် ဗမာအစိုးရ ခလရ (၁၂၈) တပ်များနှင့် ကေအိုင်အေ မျိုးချစ်ရဲဘော်များ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလျှက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါ သည်။ ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၃၆) ဒေသ ဖိုင်ကောင်းကျေး ရွာရှိ ဘုရားရှိခိုးကျောင်း အောက်နား လယ်ကွင်းပြင်တွင် ယနေ့ည (၈း၀၀) နာရီအချိန်ခန့်မှ တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ယခုစတင်ရေးသားချိန်အထိ တိုက်ပွဲများပြင်းထန်လျှက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ဗမာစစ်တပ်ဘက်မှာ (၁၂၀ မမ) လက်နက်ကြီးများကို အသုံးပြုပစ်ခတ် နေကြောင်းလည်း သတင်းရရှိပါသည်။
at 6/26/2013 08:48:00 PM No comments:
at 6/26/2013 08:35:00 PM No comments:
at 6/26/2013 08:05:00 PM No comments:
at 6/26/2013 04:27:00 PM No comments:
at 6/26/2013 03:10:00 PM No comments:
at 6/26/2013 02:21:00 PM No comments:
at 6/25/2013 11:33:00 PM No comments:
at 6/25/2013 10:07:00 PM No comments:
at 6/25/2013 05:57:00 PM No comments:
at 6/25/2013 05:47:00 PM No comments:
at 6/25/2013 05:20:00 PM No comments:
at 6/25/2013 05:19:00 PM No comments:
at 6/25/2013 05:11:00 PM No comments:
Lai wa sai June (18) ya jahpawt daw hkying (10:00AM) ten ram hta lahta Sam Mung Mungwui Buga, nta htinggaw (8) sha nga ai Nawng Bat kahtawng hpe U Kyaw Myit ngu ai wa woi awn ai Panse pyitusit hpung ni kawn sa du zingri zingrat adip arip ayai aya di kau ya lai wa sai lam shiga na chye lu ai. Mare masha niadum nta ni yawng hpe la hpa n nga hkra amyaw amya di kau da ya ai sha nnga, ramma (4) hpe mung adup zingri kau da ai lam, marai (2) hpe gaw gap sat kau da nna, (2) hpe gaw ya du hkra rim woi da ai lam na chye lu ai. U Kyaw Myit gaw ka-ni hpaga lau ban kaba rai nna, Miwa mung masha langai re lam hpe mung na chye lu ai. Ndai zawn galaw ai hta woi awn shang lawm ai gaw Nawng Bat Kahtawng na Jinghpaw num hpe la da ai myen la re lam hpe mung na chye lu ai.
at 6/25/2013 05:10:00 PM No comments:
at 6/25/2013 07:52:00 AM No comments:
at 6/25/2013 07:51:00 AM No comments:
(Minmaha Bagan Fb စာမျက်နှာမှ)
ကဲအောင်သောင်း တို့ အောင်မင်းတို့
at 6/24/2013 09:09:00 PM No comments:
at 6/24/2013 07:19:00 PM No comments:
ငြိမ်းချမ်းရေးလိုလားကာ ရန်ကုန်မြို့မှ လိုင်ဇာမြို့သို့ လမ်းလျှောက်ခဲ့သောအဖွဲ့မှ လမ်းတွင်ကောက်ခဲ့သော ကျည်ခွံများဖြင့် အမှတ်တရထုလုပ်ထားသော ခရစ်ယာန်လက်ဝါးကပ်တိုင်နှင့် ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်ကို လိုင်ဇာသို့ ပင့်ဆောင်ခဲ့ရာ လိုင်ဇာလူထုက လက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုလက်ခံပေးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
လိုင်ဇာမြို့တွင် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်အများစုနေထိုင်သောကြောင့် အဆိုပါငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းလျှောက်သူများ၏ ကျည်ခွံဖြင့်ထုလုပ်ထားသော ‘မနောဝိမုတ္တိရသ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆုတောင်းပြည့် ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်’ ကိုမူ လက်ခံရန်ခက်ခဲနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း လမ်းလျှောက်ရာတွင်ဦးဆောင်သူ ဦးဝင်းချို ကပြောသည်။
at 6/24/2013 05:17:00 PM No comments:
at 6/24/2013 03:37:00 PM No comments:
at 6/24/2013 03:34:00 PM No comments:
at 6/24/2013 03:24:00 PM No comments:
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya KIA Dap Ba (5) npu, Dap Dung (3) kata na Gyi Hawng Hkawng kawn Saga Pa mare masha ni hpe June (23) ya shani sa adup zingri lai wa sai lam shiga na chye lu ai. Mabyin gaw, Saga Pa Mare hta nga ai mare masha ni gaw majanamajaw hprawng yen hkawn mat ai kawn Mare de bai nhtang wa ai nau nna shi ai lam, Saga Pa na mare Salang rai nga ai Slg. Dashi Nawng Hkum gaw mare kata hta ka-ni nanghpam hpe pat jasan let,
at 6/24/2013 03:03:00 PM No comments:
at 6/24/2013 01:29:00 PM No comments:
at 6/24/2013 01:28:00 PM No comments:
at 6/23/2013 10:07:00 PM No comments:
at 6/23/2013 08:55:00 PM No comments:
at 6/23/2013 04:57:00 PM No comments:
at 6/23/2013 04:43:00 PM No comments:
at 6/23/2013 11:17:00 AM No comments:
at 6/23/2013 11:16:00 AM No comments:
at 6/23/2013 04:26:00 AM No comments:
at 6/23/2013 04:25:00 AM No comments: